Izambatho zangaphansi zabesifazane ezinamafashini 2015. Izindlela zangempela zezingubo zangaphansi zikabesifazane zika-2015, isithombe.
Mhlawumbe, izingubo zangaphansi ziyingxenye yezingubo zokugqoka ezigciniwe kakhulu. Amaphakati namabhrashi asuke angakapheli ukushintshashintsha kwenkathi yezemidlalo. Yebo, okungenani, kuncane kakhulu kunezingubo, iziketi kanye nama jeans. Kungani ukungabi nabulungisa okunjalo? Kulula. Into esemqoka ekhineni ilula futhi isebenze. Akekho futhi ongeke abe nomqondo omuhle ozoshintsha induduzo yakhe ngenxa yokuvuthwa kwesibindi esiphefumulayo esifubeni sakhe, izigqoko eziwela phansi, izibhamu kanye ne-abrasions. Noma kunjalo, abaklami bathola amathuba okubona ukucabanga kwabo futhi sonke isikhathi sonyaka sinikeza abesifazane izindlela ezintsha zezingubo zangaphansi.
Imfashini yokugqoka engaphansi kwezingubo 2016 - iyini isimo? Izambatho zangaphansi zabesifazane abasebenzisa imfashini 2016: imibala nemigqa
Imfashini yokugqoka engaphansi kwezingubo 2016 - iyini isimo?
Ukuze i-lingerie yama-fashionable 2015, izitayela eziningana zizosebenza. Ikhaya - ukuhlukaniswa okucacile kwezitayela. Yonke imidwebo yezingubo ingahle ibekwe ngokomzimba ibe yizitayela ezintathu: ezijabulisayo, zothando futhi ezingokoqobo. Izikhwama ezimnandi nezidumbu kufanele zibe njengobunono obukhulu ngangokunokwenzeka ngemininingwane eminingi: umbani, ukufakwa kwezintambo, ukusika nokusika. Izambatho zangaphansi zothando kufanele zenziwe ngemibala ethambile futhi zingabi nakakhulu kakhulu. Kodwa izinkambo ezisebenzayo kufanele zikhululeke futhi zibe lula ngangokunokwenzeka. Ngo-2015, abaklami balandela la mithetho engabhalwanga futhi abazange bahlanganise izitayela ezahlukene ngesethi esisodwa.
Izigqoko zangaphansi zihambisana nesibhamu senkampani eyimfihlo. Iyakuthanda ukuqonda komuntu futhi ikuvumela ukuthi uqale ukucabanga okufisa kakhulu. Kodwa okokuqala, izingubo zangaphansi kufanele zenze umsebenzi wokuzivikela futhi zihlangabezane nezinga eliphakeme lezinga eliphezulu. Indlela ongakhetha ngayo engaphansi kwezingubo zangaphansi, okuzoba kuhle futhi ukhululekile, uzofunda kusuka kusihloko sethu.
Ngokuqondene nezitayela, inkathi yesithathu izobe iphakame kakhulu. I-panties yama-fashionkazikazi enhle kunazo zonke 2015 kufanele ibe phezulu futhi ikhumbule kancane amabhuluthi amfisha, namabhrasi - avaliwe kakhulu. I-chic ekhethekile i-corset nebhande lamasitokisi. Ama-shirts we-silika, ama-top-bustier, izinhlanganisela kanye nama-lace shirts - zonke lezi zimfanelo zesitayela sama-1920 zizobuyela esimweni ngo-2015.
Izingubo zangaphansi kwabesifazane
Uzohlala emfashini naseklasini. Ilineni elimnyama elimnyama noma elimhlophe lihlala njalo libukeka kahle kakhulu emzimbeni wesifazane. Kunomhlobo othile womlingo oheha abantu, okwenza ukuba bangabanjwa ngokungazi kahle ubuhle besifazane. Ngamhlophe, amadoda abona ububele nokuhlanzeka, futhi emnyama - ukugcizelela kwesifiso kanye nokunye uhlobo lokuvunywa embhedeni, i-swagger. Ngonyaka ka-2015, i-lace emnyama iyoba yinto yangempela njengomhlobiso, futhi ngesimo sezinkiti ezigqotshiwe kusuka kulolu thambo. Phakathi kwezintandokazi zale nkathi nazo ziyizinkinobho zokufaka okuphambene, isibonelo, okubomvu, okwesibhakabhaka noma ye-burgundy.
Underwear Underwear 2015: imibala kanye nezindwangu
Izindwangu - i-springboard eyintandokazi yokuhlolisisa umklami ngezingubo zangaphansi. Sithole ukuthakazelisa okujwayelekile nge-satin, i-lycra, i-guipure. Kwakukhona, kubonakala sengathi isifo esincane esifushane nge-velvet. Kusukela ekuqaleni kwenkulungwane yeminyaka emisha, imibono yabakhi beye yaba lula kakhulu. Yikuphi ubuholi bezinkathi obamba imidwebo engaphelele, i-guipure, i-lace. Okufanele kakhulu ngonyaka ka-2015 kuzokwenziwa izindwangu zikotini, isilikhi e-elastic e-french knitwear, futhi-ke, ama-motifs amnandi okuthandana nomzimba afana nama-appliqués nama-embroideries.
Ngonyaka ka-2015, lapho udala amamodeli othandana nabalingisi bezingubo zangaphansi, bakhetha ukusebenzisa u-silk, i-satin ne-chiffon ukhilimu nama-pastel amathoni. Izitayela ziyingqayizivele. Naphezu kokungenzi lutho, i-lace yinto ewuthandayo yezingubo zangaphansi ze-sexy. Ngakho-ke, emabhantshini amafashini nama-panties ngo-2015, i-lace ihlanganiswe ne-chiffon eguquguqukayo. Phakathi kwemibala yangempela: i-cherry, i-sangria, i-purple, ikhofi, ebomvu, emnyama.
Ngokwezigcawu zangaphansi zokugqoka, okuyinto lo nyaka okufanele ukhululeke futhi ube mncane, abakhiqizi abaningi bakhetha ukotini nezithunzi ezingathathi hlangothi.
Imibala emihle kunazo zonke zangaphansi kwezingubo zangaphansi zabesifazane nazo zonke izinhlobo ze-beige, ezivela ekhofi nobisi, eziphela nge-gray and pink; i-corporal; kanye nenhlanganisela ye-brown and gray, ushokoledi negolide, mocha kanye ne-pudrovoy.
Izingubo zesikhumba ezenziwe ngefesheni
Indlela yokunquma ubukhulu be skirt
Umaski wokuhlukaniswa uphela ngoju uju ekhaya
I-ode elimnyama: ukuqoqwa kokwenza MAS Flamingo Park 2016
Imithetho ye-hot hot inoveli yabaqalayo
U-Alena Shishkov uphinde wamangalelwa ngezinsizakalo zokuhambisa
Indlela yokunakekela i-dwarfish leyo ye-terrier
Ubunandi obufudumele ngunandi noshizi
Isaladi kusuka emathunjini namakhowe
Ama-tartlets anesithakazelo ane-cottage cheese filling
I-horoscope yabesifazane ngoFebhuwari 2014
Boston ubhontshisi ubhaka